ပန်ဒိုရာ: ကျွန်ုပ်နှင့် ကြေးအိုး
Posted by pandora at 11:05 PM
တစ်ကိုယ်တည်းနေထိုင်ကာ မချက်တတ် မပြုတ်တတ်သူများအဖို့.. ပုံကြည့်ရင်း သွားရည်ယို.... တဲ့
သိမယ် မပန်.. သိမယ်...
ဒါပေမယ့် တကယ်ကို သွားရည်ကျသွားတယ်ဗျာ. ဟတ်ဟတ်ဟတ်
But thanks for the recipe..
မပန်...အင်း....ဒေါသတကြီးနဲ့ လက်စားချေ လိုက်တာပေါ့လေ။ ရက်စက်ပါပေ့။ ရွှတ်....ဖတ်.....
ကျွန်တော်က အနောက်နိုင်ငံမှာ မနေပေမယ့် စင်ကာပူမှာ ကြေးအိုးစားချင်တိုင်း အင်းလေးမှ မကောင်းသောကြေးအိုးကို ဈေးကြီးပေးစားနေရတာ။ ပြောရင်းနဲ့ စားချင်လာဘီ ပန်ဒိုရာရဲ့ ကြေးအိုးကို။
တနိုင်ငံတည်းတူတူနေတဲ့ဥစ္စာ ဖုန်းလေးတောင် ဆက်ခေါ်ဖော်မရဘူး။ ခေါ်ဝူး မပန်ကို။
အခုပဲ အင်းလေးက ကြေးအိုးစားပြီးပြန်လာတာ။ ပန်ဒိုရာချက်တာလောက်တော့ ဘယ်ကောင်းမလဲနော် :D
၀က်ရိုးက ပိုချိုတယ်.. wet market မှာဖြစ်ဖြစ် .. cold storage မှာဖြစ်ဖြစ် ၀ယ်လို့ရတယ်. နည်းနည်းပို ပြုတ်ရတယ်.. နောက် လေ.. ဟီး အမှုန့်ထဲကို ကောက်ညှင်းမှုန့်နည်းနည်းနဲ့ ကော်မှုန့်နည်းနည်း ထည့်ရတယ်လို့ပြောကြတယ်.. သဲလေးလဲ ခဏခဏ လုပ်စားတယ်.. သိလား အမ.. အဲဒါတင်မလို့ အမဦးသွားလို့ တင်တော့ဘူး..
"အချိုးအစားကို မေးလျှင်မူကား တိတိကျကျမပြောနိုင်ပြီ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပန်ဒိုရာသည် ဖော်မြူလာ ပုံသေနည်းများကို မုန်းတီးသူပီပီ အနုပညာလက်ဖြင့်စမ်းသပ်၍သာ ဆုံးဖြတ်သူ ဖြစ်သောကြောင့်တည်း။"
အခုမှ တကယ့် ‘ချက်ခြင်းရဲ့ အနုပညာ’… :D မပန်တို့ကတော့ ဆားချက်ရာကနေ ဟင်းချက်တဲ့အဆင့် တက်သွားပြီ။ ကျွန်တော်တော့ ဆားတောင် မှန်မှန်မချက်နိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။
Ba Lu Kyi said...
မပန်ဒို ရဲ့နည်းအတိုင်း အားမှချက် ကြည့်အုံးမယ်..
Ma Pan ka taw p yinn taw yinn bar bei lar..
Someone must be really lucky!!! :D
ကြွရောက်ချီးမြှင့်သူများ အားလုံး ကျေးဇူးပါ.. တချို့တွေနဲ့တော့ အခင်အမင်ပျက်သွားပြီ ထင်တယ် ဟီးး..
မောင်ရန် >သိမယ် သိပါတယ် သိပ်သိတာပေါ့ ဟတ်ဟတ်ဟတ်
ကိုမောင်ရင် > ရက်စက်သင့်ရင် ရက်စက်ရမှာပဲ.. ၀ူးထွားထွား
ပုံရိပ် > လက်စားခြေခြင်းသည် ချိုမြိန်၏ ဟိဟိ
ပီတိ > သတိရပြီး အင်းလေးမှာ သွားစားတော့ အင်းလေးကို ပရိုမိုးရှင်း လုပ်ပေးသလို ဖြစ်နေပြီ။ ကော်မရှင် သွားတောင်းမှ
ဇင်ကိုလတ် > နောက်ဆို စားချင်ရင် ညနေတိုင်း အိမ်နားလာလာချောင်း
သဲလေး > တိဒယ် ၀က်ရိုးက ပိုချိုတာပေါ့ ဈေးကြီးတယ်။ ကြက်ရိုးက ၁ ကျပ်ဖိုး ၃ ချောင်း..ဘလော့ဂ်စဖီးယား တစ်ခုလုံးကျွေးမှာဆိုတော့ ပေါချောင်ကောင်းပဲလုပ်လိုက်တယ် (…လို့ မဆိုလိုပါဘူး..လို့)
ကိုပု > စည်းစနစ်မကျတဲ့လူဆိုတော့ အနုပညာလေး ဘာလေးနဲ့ ခပ်တည်တည် ရွှီးရတာပ။ ဟီး။
မလေး.. > ကံကောင်းတဲ့လူလားး.. အင်း ကံအကောင်းဆုံးလူပေါ့။
ကိုပီတိပြောတဲ့ အင်းလေးက ကြေးအိုးဆိုတာ တော်၂ဆိုးတာပဲ ။ မပန်ရဲ့ ကြေးအိုးကိုတော့ ဒီတခေါက် မမှီလိုက်တော့ဘူး ။ သဲသဲလေး ကြေးအိုးကို စောင့်စားရမယ်း)
ခွန်အားရှိသောစာ … အရသာရှိသောစာဖြစ်မှာ…
ဖတ်ရုံတင် ဖတ်မိလို့ကတော့ ၀မ်းဟာစေသောစာ … သွားရည်ယိုစေသောစာပဲ …
ဟင်းးးး လုပ်ရက်ပါပေ့ မပန်ပန် …
ပြောထားဦးပေါ့ဗျာ.. ချင်ကာပူရောက်လို့ရတော့ ချင်ကာပူသူတွေ ချားချရာ မချိအောင် .. အတီးအရွက်တွေ အကုန်ဝယ်သွားမယ်..ဟက်ဟက်ဟက်
i've been paintakingly looking for local mustard at the ntuc in ang mo kio but in vain :-(
can you pls tell me where i can get it??
do you think it's better to put "tayoke masala" in the soup??
thanks! thanks! thanksazillion in advance!
to Paysi>> I found local mustard in ntuc fair price at clementi and boonlay. but not everyday. Saturday would be the best. You may also find it in coldstorage.
I dont know about "tayoke masala". I did not put any spices in the soup but justalittle bit ginger and garlic.
Sound so interesting...
May I know where you get those formula? Or you know from your Mummy? Or your someone special teach you how to do...?
I really like to eat NOW....
If you do it at next time, invite me, can?